Nazi ezinye zezizathu ezenza owesifazane angafiki kuvuthondaba | News24
Nazi ezinye zezizathu ezenza owesifazane angafiki kuvuthondaba
Johannesburg - Nakuba abantu besilisa behlale befika kuvuthondaba uma benza ucansi, akunjalo ngaso sonke isikhathi kubantu besifazane.
Nazi ngezansi ezinye zezizathu ezenza abesifazane bangafiki kuvuthondaba kwesinye isikhathi uma kwenziwa ucansi.
1. UKUPHUTHUMA UKUDLALISANA/UKUWOTAWOTANA (FOREPLAY)
Ukuwotawotana kubalulekile uma ufuna ukufika kuvuthondaba njengomuntu wesifazane. Iningi labantu besifazane lidinga cishe imizuzu engu-20 yokuwotawotwa ngaphambi kokuba kwenziwe ucansi. Ngakho uma ufuna ukufinyelela kuvuthondaba, ungajahi ukwenza ucansi.
2. UKUKHATHAZEKA NGOKUFIKA KUVUTHONDABA
Uma sewenza ucansi kodwa ulokhu unokukhathazeka ngokufika kuvuthondaba, lokho kuzokunika inkinga yokufika kuvuthondaba. Uma ukhathazekile ngesikhathi wenza ucansi uyalibala ukujabula nokuthi kumele uzithokozise.
OLUNYE UDABA: Ucansi lumnandi uma owakwakho ephiwe induku
3. ININGI LABESIFAZANE ALAZI UKUTHI LIJABULA UMA LITHINTWA NGAKUPHI
Kubalula kakhulu ukufika kuvuthondaba uma owesifazane ezazi ukuthi uthintwa ngakuphi uma enza ucansi ukuze ezofika kuvuthondaba. Uma wazi ukuthi uthokazi ngakuliphi uhlangothi uyakwazi ukuholela owakwakho ngalapho uma nenza ucansi ukuze ufike kuvuthondaba.
4. UKUNGASHISI / UKUNGALANGAZELELI UCANSI
Bancane kakhulu abesifazane abafika kuvuthondaba ngokuthi benze nje kwenziwe ucansi kuphela. Iningi labo kudingeka lishise, lilangangazelele ngokwanele ukwenza ucansi ngesikhathi kusadlaliswana ukuze lifinyelele kuvuthondaba.
5. UKUPHAZANYISWA WENZA UCASNI
Uma kukhona okukuphazamisayo ngesikhathi wenza ucansi, lokhu kungenza kubenzima ukuthi ufinyelele kuvuthondaba. Ukucabanga ngezinkinga zemali noma zomsebenzi ngesikhathi wenza ucansi kwenza ungafinyeleli kuvuthondaba.